Waiyan's Blog | It's kind of fun to do the impossible.
Cross Origin Resource Sharing – CORS– isatechnique that permits that kind of situation. It allows the clients to communicate servers from different origin. For example, when abc.com requests some resources from def.com, same-origin policy usually block the request. By supporting CORS, the server can includeaspecial header in the response to allows clients to access data.
ToDo list အတွက် HTML markup တွေ ဘာသုံးရမလဲဆို ဘာမှ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး စဉ်းစား စရာ မလိုပါဘူး။ Unorder list (ul) က သာ အသင့်တော်ဆုံးပါ။ task တစ်ခုချင်းစီ ကို li နဲ့ ကိုယ်စားပြုလိုက်တာပါပဲ။ li ကို task wrapper တစ်ခု အနေနဲ့ ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ (တကယ်တော့ task ထဲမှာ mark လုပ်ဖို့ checkbox ရယ် delete button ရယ် ပါပါသေးတယ်။) UI design ချပြီးသွားတော့ firefox နဲ့ chrome ပေါ်မှာ run ကြည့်လိုက်တော့ rendering က အဆင်ပြေပြေ ပေါ်လာတာ တွေ့ရတယ်။ နောက်နေဲ့ ရုံးကစက်က IE ပေါ်မှာ စမ်းလိုက်တော့လည်း အဆင်ပြေတယ်။ ဒါနဲ့ web design နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တိုးတက်လာတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သုံးသပ်မိတယ်။ (အများကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အရင်က အတော်ပိန်းတာ :D) ဘယ် HTML markup တွေ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာ နည်းနည်း သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒီလိုပဲ CSS property တွေ ဥပမာ position ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ တော်တော်လေး သဘောပေါက်သွားတယ်။